Apple Pay na-aga n'ihu na mgbasawanye na Japan | Esi m mac
Apple Pay enweghi ike ikpochapu uwa nile. Na mgbasawanye meteoric ya site na kọntinent dị iche iche, taa anyị na-ekwuputa mgbasawanye nke ụlọ ọrụ na-arụ na ahịa ndị Japan iji gbaa ume iji nke akwụkwọ akụkọ ya.
Dị ka blog ndị Japan si kwuo Ata Anya, Apple ga-weputara taa a kpọọ nkwalite "Ndụ Ọhụrụ", nke ọ ga-agụnye isi ụlọ akụ isii dị na mba Eshia na teknụzụ ya, yana nkwalite dị iche iche iji kwalite iji ugwo ekwentị.
N'etiti nkwalite ndị a na-enye, nke ga-enwe a oge nke ọnwa 2 rue Eprel 30 ọzọ, nyeghachi ha ego, nchịkọta ihe, ma ọ bụ ụgwọ ọrụ pụrụ iche maka ịzụrụ ihe n'ụdị ụfọdụ.
Ndi oru di iche iche aburula akụkụ nke nkwalite ohuru nke ulo oru North America: site na ụlọ ahịa ọgwụ gaa na ụlọ ahịa mkpọsa, site na ụlọ ahịa brik na-ngwa agha, ụlọ ọrụ tagzi, sinima, ebe nrụọrụ weebụ na-ebuga nri, ...
Ọzọkwa, ụlọ akụ ndị ejikọtara na mgbasa Apple ọhụrụ a na Japan ga-abụ APLUS, EPOS, JACCS, Cedyna, POCKETCARD na NDIFE, na-agbasawanye ụdị ụlọ akụ ndị kwekọrọ na ya site n'inwe ụlọ akụ ndị dịbu na teknụzụ ha. Na-abịa oge adịghị anya SCU A ga-agbakwunye ya na "mkpọ nkwado".
Ọ bụghị oge mbụ Apple amalitela ụdị nkwalite a maka mee ka ọmụrụ nwa dịkwuo na ngwaahịa ọ bụla. Nzọụkwụ a na Apple Pay na akụkụ nke ahịa Eshia bụ nzọụkwụ emerela tupu ma na United States na Australia ma ọ bụ na mba Europe ụfọdụ.
Anyị ga-ahụ otu nkwalite ọhụụ a si emetụta ọnụọgụ nke ụlọ ọrụ Californian na mba Japan. N'oge a, n'ọnọdụ ndị yiri ya na mba ụfọdụ dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, atụmatụ ahụ na-akwụ ụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple Pay na-aga n'ihu na mgbasawanye na Japan
Odida mgbe ị na-anwa ịhazi diski mpụga na macOS